Qalabka SEO-ga ee khadka tooska ah loogu talagalay xiriiriyeyaasha, ereyada muhiimka ah iyo raadinta darajada
50 + Qalabka SEO-ka ee Online-ka ah ee Hantidhawrka, Korjoogteynta Backlink, Cilmi-baarista ereyga, iyo Raadinta Darajada
Khamiista, Febraayo 18, 2021 Talaado, Febraayo 23, 2021 Douglas Karr
Waxaan had iyo jeer fiirineynaa aalado waaweyn oo leh $ 5 bilyan oo warshad ah, SEO waa hal suuq oo leh tiro qalab ah oo kaa caawin kara. Haddii aad baareysid adiga ama xiriiriyeyaasha gadaal ee tartamayaashu, waxaad isku dayeysaa inaad aqoonsato ereyada muhiimka ah iyo ereyada isku-xirnaanta, ama aad si fudud isugu deyeyso inaad kormeerto sida boggaagu u kala sarreeyo, halkan waxaa ku yaal aaladaha ugu caansan SEO iyo aaladaha suuqa.
Astaamaha Muhiimka ah ee Qalabaynta Mashiinka Raadinta iyo Istaraatiijiyadaha Raadinta
Hubinta - Hantidhawrka SEO ayaa gurguurta boggaaga waxayna kugula socodsiinayaan arrimaha saamaynta ku yeelan kara qiimeyntaada.
Falanqaynta Backlink - haddii bartaadu ay ku xiran tahay boggaga leh mashiinka mashiinka raadinta oo liita, waxaad yeelan kartaa darajo waqti xun ah. Awood u lahaanshaha falanqaynta mugga iyo tayada xiriidhada tilmaamaya degmooyinkaaga ayaa lagama maarmaan u ah cilad bixinta sare ee arrimaha darajada iyo falanqaynta tartanka.
Cilmi-baarista Tartan - awoodda aad u leedahay inaad gasho ama aad ka hesho tartamayaashaada, darajooyinkooda, iyo waxa ka soocaya boggooda iyo bogaggaaga kaaga si aad u aqoonsan karto meelaha banaan ee aad buuxin karto.
Data Macdanta - Si aan caadi aheyn uga maqnaa inbadan oo ka mid ah barnaamijyadan ayaa ah awooda lagu sumadeeyo, loo kala sooco, la isu geeyo, macdanta loo soo saaro, loona soo saaro warbixinno ku saabsan noocyo keywords aad u ballaaran.
Soo helitaanka ereyga - halka qaar badan oo ka mid ah aaladaha kormeerku ay ku siinayaan qiimeyn sax ah, iyagu kuu oggolaan maayaan inaad ogaato ereyada muhiimka ah ee aad ku qiimeyn karto ee aadan ka warqabin.
Isku keyword keyword - kormeerida dhowr eray oo muhiim ah ayaa laga yaabaa inaysan siin karin sawir sax ah sida isku-darka isku-darka ereyada isku midka ah iyo ka warbixinta sida aad guud ahaan u sameyneyso mowduuc. Isu geynta ereyga ayaa ah muuqaal weyn oo ka mid ah qalabka kormeerka darajada SEO.
Cilmi-Keyword - fahamka erayga muhiimka ah ee la xiriira alaabada iyo adeegyada aad bixiso waxay muhiim u tahay dadaalka suuqgeynta waxyaabaha aad ka kooban tahay. Qalabka cilmi-baarista ee eray-bixinta badanaa wuxuu bixiyaa ereyada isku-dhafan ee isku-dhafan, isku-darka ereyada la xiriira su'aasha, isku-darka ereyga-dabo-dheer, iyo tartanka ereyga muhiimka ah (sidaa darteed waqtigaaga kuma lumineysid inaad isku dejiso inaad ku kala sarreysid shuruudaha uma banaana inaad fursad u hesho jarid ku saabsan.
Kormeerka Keyword keyword - awoodda aad ku geli karto ereyada muhiimka ah ka dibna aad ula socoto qiimeyntooda waqti ka dib waa astaamaha aasaasiga ah ee inta badan barnaamijyada. Maaddaama natiijooyinka raadinta ay inta badan yihiin kuwo shaqsiyan ah, awooddan ayaa inta badan loo adeegsadaa falanqaynta guud ee isbeddelka si loo arko haddii dadaalka aad sameyneyso ay hagaajinayaan darajadaada ereyada muhiimka ah iyo in kale.
Kormeerka Darajada Koodhka Maxaliga ah - maadaama goobta adeegsadaha raadinta iyo meheraddaadu kaalin weyn ka ciyaari karaan, inbadan oo ka mid ah astaamaha kormeerka eray bixinta waxay siinayaan habab lagula socdo heerkaaga juquraafi ahaan.
Xoqitaanka & Falanqaynta Gudaha - Qalabka falanqeynaya darajooyinkaaga bogga, dhismaha bogga, xawaaraha bogga, iyo arrimaha kale ee la xiriira ayaa ah wax fiican in la saxo arrimaha laga yaabo inay ka muuqdaan wax yar laakiin taasi waxay kuu horseedi kartaa dhibaatooyin badan markii aad darajaynayso.
Share of Codka - Warbixinnada sirdoonka ee tartamaya ee ku siinaya astaantaada habab guud oo raad raac ah si aad u muujiso qaybtaada raadinta iyo wadahadalka bulshada ee khadka tooska ah ee internetka ayaa ku tusaya haddii aad horay u socoto. Si kastaba ha noqotee, waxaad kordhin kartaa muuqaalkaaga raadinta, laakiin waxaa laga yaabaa in qofka kula tartamaya uu qabanayo shaqo xitaa ka sii wanaagsan.
Saameynta Bulshada - Waa wax iska dabiici ah in dareenka aad ku soo jiidaneyso baraha bulshada ay tilmaam weyn u tahay awoodda aad ku dhistay matoorada raadinta. Barmaamijyada cusub ee SEO waxay siinayaan aragti ku saabsan isku xirnaanta udhaxeysa raadinta iyo bulshada waana la bixinayaa!
Cilmi baarista Youtube - inta badan waa la iska indhatiraa, Youtube waa mashiinka raadinta # 2 ee adduunka iyada oo ay sii kordhayaan ganacsiyada iyo macaamiisha mowduucyada baaritaanka ee raadinaya sharraxaadda fiidiyowga, astaamaha alaabta, iyo sida loo sameeyo.
Liiska Qalabka Raadinta Mashiinka Raadinta
Bing Tools Webmaster - hagaaji waxqabadka boggaaga raadinta. Hel marin u hel warbixinno bilaash ah, qalab iyo ilo.
Tools Webmaster Google - wuxuu ku siinayaa warbixinno faahfaahsan oo ku saabsan muuqaalka bogaggaaga ee Google.
Liiska Qalabka SEO ee Xiriirinta, Erayada muhiimka ah iyo Raadinta Darajada
AccuRanker - Qalabaynta hannaanka raadinta sida ereyadaada muhiimka ah ay ugu kala sarreeyaan makiinadaha raadinta Google iyo Bing iyaga oo wata cusbooneysiin illaa-labaad ah.
Sahaminta Websaydhka Sare - Qiimeyn cusub maalin walba, toddobaadle iyo baahi. Loogu talagalay desktop-ka, mobilada iyo raadinta maxalliga ah. Waxaa si fiican loogu soo koobay warbixinnada calaamadda cad. Laga heli karo qalab kasta.
Ahrefs Sahamiyaha Goobta - Tusmada ugu weyn uguna cusub ee xiriiriyeyaasha tooska ah. Index ayaa la cusbooneysiiyaa 15 daqiiqo kasta.
AwoodLabs - U adeegso darajaynta mashiinka raadinta iyo xogta keyword-ka si aad otomaatig u noqoto kormeerkaaga SEO, ula soco qiimeynta maxalliga ah iyo tan moobiillada, iyo soo kabashada ereyada muhiimka ah ee aan la bixin.
BrightEdge SEO waa barxada kowaad ee SEO si loo gaadhsiiyo ROI la xaqiijiyay - awood u siinta suuqleyda inay kordhiyaan dakhliga ka soo gala raadinta dabiiciga qaab la qiyaasi karo oo la saadaalin karo.
Garashada SEO Waxyaabaha gaarka ah ee SEO ee kor u qaadi doona falanqaynta xiriirkaaga iyo natiijooyinka dhismaha isku xirka.
lugeyana-shimbir wuxuu ku siinayaa aragti ku saabsan sida taraafikada iyo macaamiisha badan looga helo SEO.
Iftiinka Iskuduwaha waa midka ugu ballaaran ee la isticmaalo ee loo yaqaan 'SEO platform' - awoodsiinta ganacsatada ganacsatada si ay u xakameeyaan waxqabadka raadinta.
Platform Suuq-geynta Cuutio Inbound - Ogow jagooyinkaaga saxda ah iyo xaaladdaada tartan ee Google, la soco natiijooyinka
hagaajinta mashiinka raadinta oo falanqee waxqabadka guud ee ereyada muhiimka ah ee muhiimka ah
Metrics Dragon wuxuu ku siinayaa gorfaynta iyo fikradaha aad u baahan tahay inaad ka sarreysid kuwa la tartamaya oo aad warbixin bille ah u rogtid neecaw.
Baadh ereyada muhiimka ah waa aalad cilmi baaris keyword bilaash ah oo ay kujirto hubiyaha mugga keyword, matoor dhaliyaha keyword, dhaliyaha ereyada keywordka su'aasha, iyo matoor keyword Youtube.
Daaweynta haweenka waxay ka dhigeysaa shirkadda SEO mid fudud waana goobta kaliya ee ka caawisa suuqleyda inay si hufan uga ganacsadaan taraafikada raadinta dabiiciga.
gShift's SEO Nidaamka softiweerku wuxuu udub dhexaad u yahay xogta macaamiishaada 'SEO' (darajo, backlinks, signalada bulshada, sirdoonka tartanka, Google Analytics iyo cilmi baarista erayga) wuxuuna bixiyaa warbixinno otomaatig ah, qorsheysan, oo calaamadeysan oo calaamadeysan SEO oo waqti badan u siinaya kooxdaada adeegyada si ay u fuliyaan howlaha SEO ee hagaaji joogitaanka websaydhka macaamiishaada.
Xiriir - raad-raac sahlan oo la awoodi karo
SEO ugu weyn - Ku xir qalabka sirdoonka ee SEO iyo Internet PR iyo Suuqgeynta. Sahamiyaha bogga wuxuu muujinayaa iskuxirka soo-galidda iyo xogta soo-koobidda bogga.
Saadaasha Meta - Meta Forensics waa qaab dhismeedka websaydhka, falanqaynta isku xidhka gudaha iyo aaladda SEO oo gacan ka geysaneysa in la garto dhibaatooyinka websaydhka ee aan la arkin ee laga yaabo inay saameyn ku yeeshaan dadka ku soo booqda, raadinta mashiinka raadinta iyo ugu dambeyntii, carqaladeeya bartaada.
La soco Backlinks - Ku xafid dhammaan macluumaadka isku xirkaaga hal saqaf hoostiisa aaladaha maareynta.
Moz - barnaamijka ugu fiican fasalka SEO-ga ee xaalad kasta, laga bilaabo barnaamijkeenna SEO-ga ee hal-hal-ka ah illaa qalab loogu talagalay SEO-ga maxalliga ah, falanqaynta shirkadda SERP, iyo API awood leh.
mySEOTool - Barnaamijka softiweer ee SEO-ga oo ay adeegsadaan kumanaan kun oo naqshadeeyayaasha shabakada, la taliyayaasha SEO & Hay'adaha si ay u maareeyaan macaamiishooda SEO.
Jeegaaga Netpeak - waa aalad cilmi baaris badan oo wax ku ool ah oo loogu talagalay falanqaynta SEO-ga ballaaran. Qalabku wuxuu leeyahay astaamo u gaar ah oo u oggolaanaya falanqaynta istiraatiijiyadda dhiirrigelinta tartamayaasha iyo baaritaanka bogga hore ee boggaga tartamayaasha.
Daawashada habeenkii - Qalabka waxqabadka SEO iyo qalabka falanqaynta
Ontolo - Qalabkeena Xiriirinta Dhismaha wuxuu noqday mid ka mid ah kuwa ugu badan ee lagula taliyo suuqgeynta internetka iyo aaladaha dhismaha ee isku xirka SEO-ga ugu sarreeya iyo khabiirada dhismaha ee isku xirka waa otomatiga iyo awooda xiriirinta rajada.
Posirank - Nidaamkeenna jumlada ah ma aha oo kaliya inuu udub dhexaad u yahay adeeg kasta oo la qiyaasi karo oo SEO ah oo laga dhigayo hal dashbood - wuxuu kaloo taageeraa wadarta otomaatiga.
U meelee waa mid awood badan, qalab adeegsada-saaxiibtinimo ka dhigaya hagaajinta boggaaga waayo-aragnimo farxad leh. La soco isbeddelada maalinlaha ah, cabir waxqabadka SEO, iyo hagaajinta darajooyinka mashiinka raadinta si fudud.
Raadinta Heerka Pro - Hel tan ugu casrisan, fududahay in lagu falanqeeyo macluumaadka darajooyinka dhammaan boggaga internetka, si aad hal talaabo uga sii horreyso tartanka oo aad u weyso macaashkaaga.
Darajada RankAbove Barnaamijka SEO iyo barnaamijka sirdoonka ganacsiga wuxuu kuu suurta gelinayaa inaad si qoto dheer u qodato macluumaadka SEO ee horeyba ugu jiray farahaaga.
Daacadnimo - Hubi jagooyinka websaydhkaaga oo ku falanqee kuwa kula tartamaya makiinadaha raadinta caanka ah waqtiga-dhabta ah.
RankRanger - warbixinno maalinle ah iyo aragti ku saabsan taraafikada boggaaga iyo guulaha suuqgeynta.
RankScanner - La soco mowduucyadaaga ereyada muhiimka ah ee 'Google' koonto bilaash ah.
Darajada Tracker ee SpySERP - Waxay bixisaa bilowga SEO iyo khabiiro isku mid wadada hoose ee waxqabadkooda boggooda guud ahaan makiinadaha raadinta badan.
RankSonic - Raad-raac isbeddellada maalinlaha ah ee qiimeyntaada, hel degel horumarsan Analytics, basaaso tartamayaashaada oo aad hagaajiso darajooyinka mashiinkaaga raadinta.
Daawashada - Falanqaynta darajada, daawashada backlink, talo soo jeedinta ereyada muhiimka ah, calaamadeynta caddaanka, warbixinta iyo falanqeeyaha bogga.
Raven waxay leedahay 30 + qalab kaa caawinaya inaad natiijooyin ka hesho dhammaan howlahaan suuq-geynta internetka ah.
SEO SEO waa barta SEO-ga ugufiican ee lagu gaadhsiiyo guusha raadinta aduunka guud ahaan Organic, Raadinta Maxaliga ah, Mobilada iyo Warbaahinta Bulshada ee loogu talagalay Noocyada & Hay'adaha Sare
Raadinta qalabka - Raadintayada iyo bulshada Analytics software Searchmetrics Suite oo leh falanqeyn ku saleysan xogta iyo xalal caqli gal ah ayaa u sahlaya suuqleyda iyo SEO-yada inay kormeeraan oo ay hagaajiyaan ficilada SEO-ga qaranka ama kuwa caalamiga ah isla markaana ay sidaas ku kordhiyaan saamiga suuqa, dakhliga iyo faa'iidada.
SEOCHECK.io - jeeg darajo keyword bilaash ah oo kuu ogolaanaya inaad la socoto ilaa 50 keywords.
SEORSeller - xal dhameystiran oo calaamadeysan oo loogu talagalay wakaaladaha iyo la-taliyayaasha raadinta si ay u siiyaan labadaba barmaamijka, warbixinta, iyo xitaa adeegyada macaamiishooda.
Burbursan - qalab si loola socdo waxqabadka muhiimka ah ee SERPs. Waxaa ka mid ah raadinta tartanka iyo warbixinta.
Serpstat - madal SEO oo dhan ah oo leh SEO Audits, Cilmi-baarista tartame, Falanqaynta Backlink, Falanqaynta Raadinta iyo Raadinta Darajada.
SERPtimizer - Qalabka SEO ee iskuxirka, xisaabinta bogga iyo kormeerka ereyada.
Adiga - nadiif ah oo fududahay in la isticmaalo isdhexgalka waana dhakhso iyo sax.
Wareegtada SE - Nidaamka kormeerka mashiinka raadinta guud ee bixiya xalka martigelinta iyo is-martigelinta labadaba.
Xeebaha waxaa abuuray SEO / SEM xirfadlayaal SEO / SEM xirfadlayaal ah. Waxaan haynaa aqoon, khibrad, iyo xog kaa caawineysa inaad mashaariicdaada uqaado heerka xiga. Waxay u ururiyaan xaddi aad u tiro badan oo ah xogta SERP in ka badan 120 milyan oo eray-bixin iyo 50 milyan oo domains.
Geela SEO - Geela Seo wuxuu sameeyaa falanqeyn dhameystiran oo ku saabsan hagaajinta mashiinka raadinta bartaada, ama boggaga kula tartamaya.
Kormeerka Darajada SEO - Kordhi qiimeyntaada, La soco tartamayaashaada, oo la soco waxqabadka SEO adigoo raacaya daba galka darajooyinka ugu badan ee warshadaha.
SeoSiteCheckup.com - Raadinta Mashiinka Raadinta Oo Si Fudud Loo Sameeyay. Falanqeyn ku habboon isticmaalaha iyo kormeerka boggaaga SEO.
Sawirka SERP - waxay la socotaa booska mashiinka raadinta websaydhka ee ereyada muhiimka kuu ah.
SERPWoo - La soco DHAMMAAN 20 + Top Natiijooyinka Kelmadahaaga oo hel digniino marka tartamayaashu kordhiyaan gadaal-gadaal, calaamadaha bulshada, darajooyinka, iyo inbadan.
Liisaska Liiska - qalab fudud oo lagu kobciyo iskuxirkaaga si dhakhso leh.
Baadhitaanka aaladda - qiimeynta ereyga, raadinta tartameyaasha, falanqaynta warbaahinta bulshada iyo warbixin toos ah.
SerpStat Aaladda Soo Jeedinta Keyword - ereyada muhiimka ah ee caanka ah iyo qaababkooda kala duwan ee ay isticmaalaan dadka raadinaya alaabada, adeegyada ama macluumaadka xiisaha leh.
SpyFu soo bandhigayaa qaaciddada qarsoodiga ah ee suuqgeynta raadinta ee tartamayaashaada guuleysta. Raadi goob kasta oo arag goob kasta oo ay ku muujiyeen Google: eray kasta oo muhiim ah oo ay ku iibsadeen Adwords, darajo kasta oo dabiici ah, iyo kala duwanaansho kasta oo xayeysiis ah 6-dii sano ee la soo dhaafay.
SyCara's SEO Platform wuxuu siiyaa dadka isticmaala maareynta socodka shaqada ee warshadaha, qiimeynta raadinta maxalliga ah, warbixinta warbaahinta bulshada, iyo falanqaynta SEO.
Darajo yar - La soco qiimeyntaada iyo dadaallada bogga SEO.
Horjoogaha - Waxyaabaha Suuqgeynta Dijitaalka ah & Software Software Analytics. Iskuday adiga oo raadinaya ilaa 200 qiimeyn keyword oo bilaash ah.
Unamo - Kordhi taraafikada badan, hagaaji qiimeyntaada oo ka tag tartanka gadaashiisa.
UpCity - U ogolow UpCity inay ka caawiso meheraddaada yaryar inay taraafikada bilaashka ah ka helaan mashiinnada raadinta, warbaahinta bulshada iyo tusaha deegaanka
WebMeUp Qalabka SEO wuxuu isku daraa ku habboonaanta barnaamijka SEO-ga ee internetka oo leh xog-hodan xogta barnaamijyada desktop oo keliya ayaa bixin kara
Waa maxay SERP-kayga - Saxeexa bilaashka ah ee SERP ee WhatsMySerp wuxuu kuu oggolaanayaa inaad ka hubiso natiijooyinka ugu sarreeya ee 100 raadinta Google ee ereyada muhiimka ah. Waxaad u adeegsan kartaa inaad ku falanqeyso SERPs iyo inaad hubiso booska websaydhkaaga.
WooRank waa darajo firfircoon oo ku socota miisaanka 100-ka ah ee u taagan waxtarka suuqgeynta internetka waqti go'an. (Celceliska dhibcaha waa 50.) WooRank wuxuu ku saleysan yahay dib u eegis deg deg ah oo ku saabsan 70 arrimood oo u dhexeeya ereyada muhiimka ah illaa isticmaalka iyo kormeerka bulshada. In ka badan tiro, dib-u-eegista WooRank waxay ku siinaysaa aragtiyo qiimo leh iyo talooyin kaa caawinaya inaad duufaan ku qaadatid adduunka internetka.
Erey-bixin waxay bixisaa aaladaha Cilmi-baarista ee Keyword ee SEO iyo PPC, Qalabka Raadinta Meelaha iyo Falanqaynta Goobta.
Xusuusin: Waxaan ku leenahay akoonno xiriir la leh qaar ka mid ah barnaamijyadan.
Tags: xisaabiyeahrefsAasiya seosheybaarada maamulkamaamulayaashafalanqaynta backlinkhelitaanka gadaaladeegga backlinkdib u xiridbacklinksqalab keyword keyword ugu fiicanaaladaha ugu wanaagsan ee internetkamaamuleyaasha websaydhkadhalaalayaBrightedge seobrightedge vs kaarihubi darajada ereygahubi darajada ereygahubinta qiimeyntahubi qiimeynta mashiinka raadintahubi kala sarayntashimbirahacolbri seoqalabka colibri seocilmi baariscuutiodiiseoMetrics Dragonhubiye darajo Firefoxdarajo keyword bilaash ahfree keyword Checkerdarajo keyword bilaash ahqalab keyword bilaash ahraadinta erayga bilaashka ahhubiye darajo bilaash ahraadraaca darajada bilaashka ahbilaash seo Checkerginzametricsgoogle keyword keyword qalabraadiyaha darajada googlegoogle seo qiimeeyemareegaha googleshixnadshaybaarada gshiftgshiftlabssida loo hubiyo darajada ereygamarketing inboundmaaraynta ereygamaareynta ereyga muhiimka ahkeyword tracker booskakeyword booska raadintamaamulaha mashruuca keywordhubinta darajada keywordkeyword tool Checkerkeyword softwarekeyword tracker darajoraadinta darajada keywordkeyword software raadraaca darajohubinta darajada keywordwarbixinta darajada keywordwarbixinada qiimeynta keywordkeyword softwareqalab keyword darajayn lacag la'aan ahqalabka keyword keywordkeyword tracker darajoaaladda qiimeynta keywordcilmi-baarista muhiimka ahaaladda soojeedinta ereygaqalabka keywordraadinta keywordkeyword software raadintaaaladda raadraaca keywordqalabka raadinta keywordisku xirka dhismahaisku xidhkahaybadhaybad lehdanbiilayaasha metala soco qiimeynta mashiinka raadintamoz heerka hubiyahanetpeak hubiyahahubiyaha darajada internetkatracker darajo onlineqalab darajayn onlinegalbogga koowaad seoraadraaca darajada boggaposirankpro tracker darajohubinta darajadachrome hubiyaha darajadaqalabka hubinta darajadadarajo jeeg softwaredarajada hubinta darajadakeyword darajodarajo softwareraadraaca darajadadarajo tracker bilaash ahdarajo tracker seodarajo software trackerdarajada qalabka raadraacaraadinta darajadadarajo raadinta barnaamijkadarajada raadinta darajadadarajada qalabka raadraacahubinta darajadahubinta darajadaqiimeynta softiweerka warbixintadarajayn softwareqalabka darajayntatracker darajayndaandaansidarajodarajooyinkaorod socodtukeQalabka Rawadabarkadahadarajo-waqtiga dhabta ahwarbixintariyo seowaa Intelkala sareyntaraadiyaha booska mashiinka raadintaraadiyaha raadinta darajada mashiinka raadintaraadinta darajada mashiinka raadintaRaadinta softiweerka mashiinkaRaadinta qalabka qiimeynta mashiinkaRaadiyaha qiimeynta raadintasemrushfalanqaynta seoseo asiyaseo buuga hubiyeqalabka buugga seoseo browsergeel geelseo keyword keywordraadraaca ereyga seoseo raadinta keywordqalabka maaraynta seoqalabka kormeerkadhufto ee seoseo hubiyaha booskaseo qiimeeyekormeerka seowarbixinta darajada seoseo softwareqalab darajo seoqalabka darajada seoraadiyaha darajada seoraadinta darajada seoseo hubiyahaseo kormeeraha darajadasoo software warbixinta darajoseo software darajoao darajo qalabqalabka kala sarayntaseo raadraaca darajadawarbixin soo softwaresoo softiweerseo hubiyaha darajada aaladdaqalabka seoqalabka seo ayaa qiimeeya hubiyeraadraaca seoraad raacseo software raadraacaqalabka raadraaca seoqalabka raadraaca seoseobook darajo hubiyahabiyo xireenseocheck.ioseomozseomoz proqalabka seomoz proqalabka seomozseeranfalanqaynta serpsawirka serpserpsSerps.comserpstatxikmadliiskaqalabka baaritaankaSpyfuSpyserpyar yarkormeerahaemaylka raad raacraadinta qiimeynta ereyada muhiimka ahkeywords keywordqalab keyword twitterunamokor u kacsoftware darajayn webwebmeupbarnaamijka softiweerkawordtrackerFureyaasha YouTube
Sida Si Toos Ah Loola Wadaago Qoraaladaada WordPress-ka LinkedIn Adoo Isticmaalaya Zapier
Taasi waa liis fiican. Kaliya waxay u socotaa si ay u muujiso inta aan weli u baahan ahay inaan ka barto SEO!
Mahadsanid! Maqaalladayada SEO waa inay ku siiyaan waxaad u baahan tahay.
Liis weyn, mahadsanid Laakiin waxaan u maleynayaa in webceo la la'yahay, waa qalab fiican oo aaladaha internetka ah si loo hubiyo boggaaga kadibna loo hagaajiyo.
Qabow! Waan ku dari doonaa!
Hi Zac, waan hubiyey WebCEO taasina waa barxad desktop ah oo loogu talagalay Windows. Waxaan diiradda saarnay qalabka internetka halkan. Mahadsanid!
Waa hubaal inay tahay suuq cakiran - oo liistadani waa uun xagga sare ee barafka! Haddii aad jeceshahay inaad sameyso qoraal la mid ah laakiin u gaar ah qalabka loogu talagalay SEO-ga maxalliga ah markaa fadlan nala soo socodsii - waxaan ku faraxsanaan lahayn inaan ku biirino waxyaabaha kana caawinno daaweynta. Mahadsanid Douglas
Apr 2, 2013 at 5: 42 PM
Haye, annaga oo ah SERP Scan ayaa hadda sii deynay muuqaal raadraacyo darajo maxalli ah. Fursad kasta oo lagu daro annaga Douglas? Mahadsanid!
Apr 2, 2013 at 10: 56 PM
La cusbooneysiiyay, waxay umuuqataa qalab fiican.
Laga soo diray sanduuqa boostada ee iPhone
Apr 3, 2013 at 4: 56 PM
Mahadsanid Michael! Liiska ayaan ku daray.
May 27, 2013 at 4: 21 AM
Waad ku mahadsantahay ka mid ahaanshaha WebMeUp, Douglas!
By habka, waxaan hadda ku darnay a module Media bulshada in WebMeUp. Marka, qofku wuxuu dhihi karaa ma nihin software SEO hadda. 😉
mar kale Mahadsanid!
Jun 24, 2013 saacadu markay ahayd 1:01 AM
Waxaan adeegsaday dhowr qalab si aan ula socdo qiimeynta macaamiisheena laakiin waxaan ubaahanahay talo soo jeedin ku saabsan aalad raadin karta qiimeynta keywords keywords. Waxaan u baahanahay mid ka mid ah bogga ganacsiga e-commerce oo leh tobanaan kun oo ereyo muhiim ah si loola socdo.
Jun 24, 2013 saacadu markay ahayd 8:24 AM
Macaamiisheenna ka shaqeeya qiyaastaas waxay adeegsadaan Conductor, @disqus_wFlYDncKKH: disqus. Maaha wax raqiis ah laakiin waxay leedahay xoogaa koox-kooxeedyo iyo qaybo ka warbixineed ah. Waxaad sidoo kale iibsan kartaa qoraallada raadraaca darajadaada gaarka ah - laakiin maahan qalbi jilicsan maaddaama makiinadaha raadinta ay isku dayaan inay xannibaan adeegyadan sida ugu macquulsan.
Jul 18, 2013 markay ahayd 10:22 AM
Liis gareyn wanaagsan oo SEO ah oo Qalabka Douglas ah! WebMeUp wuxuu noqday mid kamid ah faveskeyga. Suuqa layaabka leh ee Samurai muu sameyn liistada gaaban?
Jul 18, 2013 markay ahayd 11:03 AM
Suuqa LXR wuxuu leeyahay liis dheer oo qalab weyn ah oo loo fududeeyay milkiilayaasha meheradaha yaryar ee doonaya inay sameystaan ​​SEO u gaar ah
Jul 23, 2013 markay tahay 3:21 PM
Liiska weyn! Qaarkood waxay ahaayeen kuwo aan aqoon oo waxaan u baahanahay inaan isku dayo. Kuwaas waxaan ka isticmaalay Searchmetrics inta badan, laakiin Cuutio waa inuu ku jiraa liiska, sidoo kale, waxaan u maleynayaa (www.cuutio.com)
Agoosto 23, 2013 saacaddu markay ahayd 3:28 PM
Waxaan u maleynayaa inaad fiirin karto qalabkeena - positionly.com. U qaad si aad u wareejiso oo aad keligaa u hubiso 🙂 Waan hubaa inay la kulmi doonto heerarkaaga.
Taas ka sokow, waan jeclahay xirmooyinka sidan oo kale ah. Dhammaan aaladaha waxtarka leh la isu geeyay. Fiican!
Agoosto 24, 2013 saacaddu markay ahayd 6:49 PM
Mahadsanid Krystian! Liiska ayaa kugudarey.
Jul 3, 2014 markay ahayd 7:23 AM
Salaan baa jira! liistada weyn waxaad sidoo kale tijaabin kartaa seo rank monitor, waan jeclaa ilaa iyo hadda..waxay sii daayeen nooc cusub, oo (waxaan u maleynayaa) muuqaal qurux badan.
Jul 3, 2014 markay ahayd 9:22 AM
Mahadsanid! Liiska lagu daray.
Jul 8, 2014 markay ahayd 10:06 AM
Miyaad si dhakhso leh ugu eegi kartaa xalkayaga dhulka-jabinaya ee https://www.serpwoo.com/?
Waxaan leenahay xisaabaad bilaash ah iyo kuwo lacag leh, iyo sidoo kale waxaan ku siinnaa raadinta sirta SERP dhowr eray oo muhiim ah oo aan ula soconno dhammaan xubnaha.
Waad ku mahadsantahay indha indheyntaada waxaana rajeynayaa inaan shaqsi ahaan kaa caawin karo xalkayaga haddii aad u baahato.
Jul 8, 2014 markay ahayd 11:07 AM
Weyn, waxaan kudarnay aaladdaada liiska.
Agoosto 15, 2014 saacaddu markay ahayd 2:01 PM
Hambalyo, nasiib daro lama helin liiska http://rankinity.com. Waxaan u isticmaalaa mashruucan sababtoo ah waxay qiimeyneysaa dabagalka waqtiga dhabta ah.
Waxaan rajeynayaa inay tani waxtar kuu leedahay.
Agoosto 15, 2014 saacaddu markay ahayd 4:01 PM
Mahadsanid! Liiska ayaan ku daray!
Sep 26, 2014 at 11: 01 PM
Farriin weyn laakiin aaladda aan ugu jeclahay waa ahrefs 🙂
Oktoobar 7, 2014 at 4:26 AM
Bal sidoo kale fiiri Meta Forensics sidoo kale: http://metaforensics.io. Waa aalad internetka ah oo la mid ah aaladaha desktop-ka ee 'Scrog Frog' iyo 'Xenu Link Sleuth'. Waa qodobka ugu muhiimsan ee farqiga u dhexeeya kaas oo sidoo kale bixiya warbixinno faahfaahsan oo ku saabsan qaab dhismeedka websaydhka waxayna siisaa dadka isticmaala macluumaad wax ku ool ah oo ku saabsan dhibaatooyinka ka dhici kara degelladooda.
15, 2014 at 6: 31 AM
Liis Aad u fiican oo ah Qalabka SEO… Weligey ma arag kahor .. Mahadsanid badan Douglas Karr
Miyaad eegi kartaa adeegeena https://ranksonic.com oo ku dar liiskaaga?
Waxaan ku siin karnaa macaamiil kasta oo ka tirsan suuq-geynta suuq-geynta suuq-geyn qiimo dhimis some
Horeba waa la qabtay!
Apr 11, 2015 at 4: 28 PM
Liiska weyn! Runtii waa wax laga cabsado dhammaan aaladahaas, laakiin waad ilaawday RankScanner - adoo adeegsanaya toddobaadle, waana wax ku wanaagsan ganacsi kasta, laga yaabee in aan ka ahayn shirkadaha aan qiyaasayo. Ka fikiray in ay mudan tahay in la xuso.
Apr 11, 2015 at 4: 40 PM
Mahadsanid Thomas, waanu ku darnay.
Jun 8, 2015 saacadu markay ahayd 10:34 AM
RankSonic waxay ku siisaa natiijooyin cajaa'ib leh waqti gaaban meherad kasta waxaadna la socon kartaa lambarro badan oo keywords ah. Codad fiican ayaa ii muuqda. Taasina waa heshiis ku saabsan degelkeyga. Sidoo kale waxay leeyihiin waxyaabo fara badan oo qabow.
Jul 13, 2015 markay ahayd 2:03 AM
Hi Douglas, waxaan jeclaan lahayn inaan ku helno qalabkeena liiskan sidoo kale - http://www.siteoscope.com
Jul 15, 2015 markay tahay 4:55 PM
Lagu daray! Waxay umuuqataa xirmo wanaagsan.
Jul 16, 2015 markay ahayd 2:10 AM
waa hubaal inay tahay, haddii aad weligaa xiisayso dashboardka waan kugu dhex mari karaa 🙂
Oktoobar 5, 2015 at 11:19 AM
Macluumaad Weyn…. Aad Ayuu U Caawinayaa Kuwa Bilaabaya… ..Waad Ku Mahadsantahay Bixinta…
Oktoobar 8, 2015 at 5:57 AM
Wanaagsan, aan ku kordhiyo liistadaada qalab xisaabeed bilaash ah. http://seocamel.com
Oktoobar 8, 2015 at 8:14 PM
Lagu Daray Larry! Mahadsanid.
29, 2015 at 10: 58 PM
Aad u xiiso badan, ma ogeyn in qalab aad u tiro badan suuqa yaala… Hada mid mid ayaan u aadayaa si aan u hubiyo waxa ay bixiyaan.
Apr 29, 2016 at 8: 42 AM
Liiska weyn Douglas! Miyaad u maleyneysaa in tirada qalabka SEO ay yareyn doonaan marka suuqa uu noqdo mid cufan? Waxay umuuqataa in qof kastaa qalab samaynayo maalmahan.
Apr 29, 2016 at 3: 38 PM
Qiimaha gelitaanka ee dhismaha qalabkaaga ayaa si aad ah u hooseeya, sidaa darteed anigu ma aaminsani sidaas. Xaqiiqdii, waxaan ku shaqeyneynaa kaligeen waqtigan. Dhibaatada, in kastoo, ay tahay in qalabkan inbadan oo kamida aysan la jaan qaadin algorithms-ka sidaa darteed ay siinayaan macluumaad FAL ah oo aan wax natiijo ah soo saari karin ama xitaa wax u dhimi kara shirkad adeegsaneysa. Taladaydu waxay noqon doontaa in marwalba la raadsado khibrada lataliye SEO oo leh asal adag.
May 5, 2016 at 1: 01 PM
Lagu keydiyey liistada calaamadayda. Mahadsanid. Laakiin waxaan qabaa su'aal, haddii aad ka hadasho aaladda webmaster google, maxaad u xusi weyday isku xidhka WMT iyo yandex WMT? ya, waan ogahay dadka qaar google = internetka oo dhan, laakiin maahan qof walba. Waan ogahay dad badan oo u isticmaala bing sida mashiinka raadinta asalka ah.
May 5, 2016 at 11: 24 PM
Olesya, waa qodob sax ah.
May 19, 2016 at 1: 40 AM
Liis aad u faa'iido badan oo loogu talagalay qalabka seo. Waxaan isticmaalay ku dhowaad kuwan.
Jul 26, 2016 markay ahayd 4:16 AM
Gacaliye dhammaan walaalka iyo walaasha, ma jeclaan lahayd inaad ku sharraxdo baclink ee ku yaal Alexa.com?
kani waa shabakadeyda:
markii aan iska hubiyo bogga 'Alexa', waxaa jira kaliya 2 degel oo isku xiraya xafiiska websaydhkayga in kasta oo, inbadan oo aan ka sameeyo koonto fagaarayaasha dooda. markaa intee in le'eg ayey ku xirnaan kartaa xafiiskeyga wesite. waad ku mahadsantahay naxariistaada.
Abrar - Xalka Websaydhka AP
Oktoobar 3, 2016 at 9:25 AM
Qalab aad u tiro badan. SEM Rush ayaa ugu jeclahay markay tahay iibka iyo Majestic / Ahrefs ayaa ah kuwa ugu fiican ee isku xirayaasha isku xira. Mid kale oo runtii aan jeclahay waa Mozcast. Farsamo ahaan maahan qalab, laakiin waa wax weyn in laguu xaqiijiyo markaad ku aragto dhaqdhaqaaqyo badan SERPs oo aad ogaato inaadan adiga kaliya ahayn oo waxaa jira cusbooneysiin weyn oo socota - sida ay ahayd dhowr toddobaad ka hor
Apr 29, 2017 at 7: 30 PM
SEO waa mid aad u baaxad weyn oo anigu waxaan bilaabay inaan mid noqdo. Runtii wax badan ayaa laga baran karaa. Waxaan dareemayaa culeys hadda, in badan oo aan dheefshiido. Sidee ku bilaabatay? Weligaa ma dareentaa inaad u ooyneyso hurdadaada sababtoo ah ma hubtid inaad guuleysan doontid iyo in kale?
May 1, 2017 at 8: 08 PM
Ku billow soo saaridda waxyaabo aad u wanaagsan oo loogu talagalay dhagaystayaashaada Raadintu waa kanaal ee ma ahan istiraatiijiyad. Istaraatiijiyaddaadu waa inay ahaataa inaad sii waddo bixinta qiimaha himilooyinkaaga iyo macaamiishaada.
Nov 8, 2017 at 9: 18 AM
Waxaan kugula talin karaa unamo, markii hore waxaa loogu yeeri jiray boos ahaan. Aad u faa'iido badan oo aad u jaban marka la barbar dhigo tartamayaasha.
Jul 22, 2018 markay ahayd 6:20 AM
Liiska weyn Douglas, SERPtimizer waa aalad wareegsan oo dhan oo seo ah oo leh xiriir raadinta xiriir gaar ah iyo falanqeyn tartame. Miyay noqon lahayd wax lagu daro?
Jul 22, 2018 markay ahayd 11:25 AM
Mahadsanid Erich, ayaa lagu daray!
Jul 24, 2018 markay ahayd 10:32 AM
Tani waa liis qurux badan - dhammaan aaladaha waawayn ee wadajira!
Qalabka Cocolyze.com ma yahay wax lagu dari karo? Waa aalad raadraac darajo leh interface wanaagsan iyo xog lagu kalsoonaan karo. Xiiso ayey yeelan laheyd inaad aragto waxa adiga ama dadka kaleba ay ka qabaan arintaas sidoo kale.
Jul 31, 2019 markay ahayd 11:01 AM
Waxaan ogaaday Moz inaysan kujirin liiska…? Sidoo kale, waxaan u adeegsadaa nooca lacag bixinta ee BuzzSumo si aan u hubiyo backlinks.
Jul 31, 2019 markay tahay 1:30 PM
Wow, waan ka xumahay kuwaas waan ka reebay. Mahadsanid Frank - Kuwaan waa la cusbooneysiin doonaa. Labada madalba si aad ah ayey waxtar u yeesheen.
Feb 2, 2021 markay ahayd 2:16 PM
waxaan u baahanahay seo tool pls igu hanuuni qalabkee ugu fiican?
Feb 2, 2021 markay ahayd 2:26 PM
Hello Mazhar, taasi runti waxay kuxirantahay waxaad iskudayeyso inaad gaarto. Ma waxaad isku dayeysaa inaad ku hagaajiso goobtaada darajo dabiici ah? Ma waxaad isku dayeysaa inaad ku tartanto raadinta lacagta leh? Ma iskudayeysaa inaad xawaareyso goobtaada? Ma isku dayeysaa inaad sameyso cilmi baaris tartame? Waa maxay ujeedooyinkaagu?
Feb 8, 2021 markay ahayd 2:47 PM
waxaan rabaa inaan qiimeeyo barta
Febraayo 9, 2021 saacadu markay tahay 9: 49 AM
Taladaydu waxay noqon doontaa inaan ku bilaabo Raadinta Raadinta Google (bilaash) halkaas oo aad ka diiwaan gelin karto goobta oo aad kormeeri kartid wixii arrimo ah, isticmaal Fahamka Bogga si loo hagaajiyo waxqabadka boggaaga (bilaash) markaa waxaad rabi kartaa inaad sameyso Hubinta SEO, intaa kadib waa inaad sameysaa falanqeyn toos ah oo tartame ah oo aad ka shaqeysaa sidii boggaaga uga dhigi lahaa mid kafiican kuwa kula tartamaya. Taas awgeed, waan isticmaalaa SEMrush.
Febraayo 18, 2021 saacadu markay tahay 1: 30 AM
Waxaan isticmaali jiray ahrefs iyo Moz Free SEO Qalabka waxaanan u maleynayaa in kuwani ay yihiin aaladaha loo baahan yahay ee SEO qof walba waa inuu isku dayaa. Waad ku mahadsan tahay maqaalka cajiibka ah. Waxaan jeclaan lahaa inaan helo maadaama aan rabo inaan soo bandhigo xarun cusub oo macluumaad ah oo ku saabsan websaydhkeena ( Doodle Digital ). Mahadsanid!
Febraayo 19, 2021 saacadu markay tahay 1: 20 AM
Toddobaadyadii la soo dhaafey, waxaan raadinayey qalab SEO oo ku habboon si aan ula socdo wax qabadkayga SEOper. Qalabka aad sheegtay badankood gebi ahaanba aniga way igu cusbaayeen. Waad ku mahadsantahay wadaagida aaladaha raadinta ereyada muhiimka ah. Waxaan dhawaan isticmaalay qalab hubiyaha SERP, Serpple. Waxaad sidoo kale sahamin kartaa aaladda si aad ula socoto xogta darajada keyword. Intaas waxaa sii dheer, ma qori kartaa maqaal sharxaya faa'iidooyinka isticmaalka SERP Checker tool ee SEO maalmaha soo socda. Tani waxay caawin kartaa suuqleyda dhijitaalka ah sida aniga oo kale.
Febraayo 19, 2021 saacadu markay tahay 8: 43 AM
Waad ku mahadsan tahay Rachael, waxaan ku daray liiska 'Serpple' liiska!
Febraayo 22, 2021 saacadu markay tahay 7: 42 AM
Waad ku mahadsantahay tixgelintaada.
Ku dhowaad qof kasta iyo qof kasta oo ku jira liiskaaga. Laakiin waan jeclahay google qalabkiisa gaarka ah ee GWM. Mid ka mid ah kuwa ugu fiican. Qaniinyada iigufiican aniga
Waad ku mahadsantahay liiska.
Waa waxoogaa cakiran, laakiin waxaan u maleynayaa inay soo hagaageyso!